Apple kwụsịrị ọtụtụ ụdị Apple Watch na-akwado ọbịbịa nke Apple Watch Series 3 | Akụkọ akụrụngwa
N’ime awa ole na ole Apple Keynote ga-eme, nke na-eme ka ọ bụrụ otu n’ime atụmanya kachasị atụ anya maka ọtụtụ ebumnuche. Otu n'ime ha bụ premiere ọhụrụ Steve Jobs Thelọ ihe nkiri, mana nke kachasị mkpa bụ iPhone X ọhụrụ, mbata nke iPhone 8, mmalite nke iOS 11 ọhụrụ na ihe doro anya karịa na ọhụụ nke ọhụụ ọhụrụ nke Apple Watch Series 3.
Ma ọ bụ na asịrị banyere mmeghari ohuru nke Apple Watch ka agbakwunyela ugbu a mkpebi nke ndị ahụ si Cupertino ịkwụsị ọtụtụ ụdị ha ruo mgbe awa ole na ole gara aga rere na ọkara ụwa. N'ezie, ka ọ dị ugbu a, ọ bụla oge nke ụfọdụ smartwatches kachapụ iche.
N'oge a Apple Store emebeghị emechi ka enwere ike ịzụta ụfọdụ ụdị Apple Watch, ọ bụ ezie na enweghị obi abụọ anyị echeghị na ọ bụ mkpebi dị mma, opekata mpe ruo mgbe anyị maara ozi ọma na ụmụ nwoke Tim kwadebeere anyị Cook .
Ọzọ anyị na-egosi gị Apple Watch kwụsịrị Apple;
42mm ụdị nke Apple Watch Edition
42mm ụdị nke Apple Watch Hermès
N'ehihie a, anyị ga-ahụ ozi ọma Apple Watch 3 na-enye anyị, ma ọ bụrụ na ndị Cupertino mee ya baptizim otu a, n'agbanyeghị na ihe niile na-egosi na anyị ga-enwe ike ịhụ a Apple Watch na LTE, nke ga-doro anya na-abụ oké ozi ọma anyị niile bụ ndị ọrụ nke smart nche.
Kedu ihe ị tụrụ anya na Apple Watch Series 3 ọhụrụ?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Apple kwụsịrị ọtụtụ ụdị Apple Watch na-akwado ọbịbịa nke Apple Watch Series 3
Akwụla ụgwọ karịa euro 80 maka SNES Classic, Nintendo gwara gị